အလောင်းခိုးထုတ်သွားသည်မဟုတ်ပါလား? | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
အလောင်းခိုးထုတ်သွားသည်မဟုတ်ပါလား?	December 10, 2009
ယေရှုဘုရား သေမြဲအတိုင်းရှိကာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု ဆိုပါက။
ပထမရာစုတွင် သူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်း အသက်ပေးကိုးကွယ်ကြကာ တိုးတက်လာသော ခရစ်ယာန်လူ့အဖွဲ့ အစည်းကို ဘယ်လို နားလည်ရမှာပါလဲ။ လေးရာစုတွင် အနောက်ကမ္ဘာကို ယေရှုလွမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လိမ်ညာမှုတစ်ခုအပေါ် တည်ဆောက် ထားသည်ဆိုက သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အာဏာနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းခဲ့ကြသော ရောမအင်ပါယာတစ်ခုလုံး ချေမှုန်းနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ကြသည့် အပြင် ယေရှုကို ကိုးကွယ်သည့် အင်ပါယာ ဖြစ်သွားစေခဲ့သည်မှာ အံ့ဩဖွယ်ရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဂျေရုရှလင်မှာ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ခန့် အမြစ်တွယ်ပြီး ရှင်သန်နေတဲ့ ဂျူးဘာသာရေးအောက်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာ ကြီးထွားလာစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ သူတို့လုပ်နိုင်တာက သချိုင်းဂူကိုဖွင့်ပြီး ၊ သို့မဟုတ် ခိုးသွားသည်ဆိုသည့် အလောင်းကို ပြဖို့ပါပဲ၊ ‘ါပေမယ့် သူတို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ယနေ့တော့ ယေရှုသည် လူ့ဇာတ်ခုံအပေါ်မှာ နေရာအရဆုံးသူ ဖြစ်၍နေပါပြီ။